FALANQAYNTA JACAYLKA: WAA MAXAY SHUKAANSI?
falanqaynta JACAYLKA, SHAKAANSIGA iyo NOLOSHA qaymaha leh....
WAA MAXAY SHUKAANSI?
Waxaa iska caddaan ah marka la soo qaado erayga shukaansi in dad badan ay dhagta taagayaan oo ay niyadooda ku soo dhacayso inan iyo inan hasaawe dhex marayo taas oo jirta ayaan hadana waxaan jeclahay in aan halkan ku falanqeeyo shukansiga iyo waxa uu yahay.
haddaan wax yar ku nasano erayga shukaansi waxaa jira erayo kale oo la macne ah kuwaas oo aan isku dayi doono in aan lafo gurno. erayadaasna waxaa ugu caansan xodxodosho,haasaawe,sheekaysi iyo erayo kale oo somaligu aad ayuu u badanyahaye aan halkan agu soo koobi karayn.
SHUKAANSI: macne ahaan waxay noqon kartaa qalqaalo iyo ku qancin in ruux ku dhiirado falida wax ruux kale uu dan bidayo, waxaadna maqashaa dhalinta oo marar badan leh odaygii aabe ahaa ayaan xoogaa lacag ah ka shukaansanayey isaga oo
ula jeeda qalqaalo, hadaanse ka eegno dhinaca eraygu asal ahaan u taaganyahay waxaan oran karnaa waxaa
eraygan la isticmaali karaa tusaale ahaan marka ruux ama gabar ama wiil uu arko ruux qanciyey isla markaana uu damco in uu soo xero galiyo soo jiidashada uu sameeyo ha ahaato ficil ama hadale waa shukaansi.
XOD-XODASHO: waxay la macne tahay shukaanse laakiin waxa ay u qaastahay raga waliba waxaan oran karnaa marka qof aad loogu qalqaaliyo guur ama gaabsi ayadoo qofka awood dheeraad ah la saarayo.
HAASAAWE: haasaawuhu waxa uu u badanyahay in aan ku tilmaamno sheeko caadi ah oo dhex marta lbo ruux oo horay isu soo shukaansday.
XIRIIR: waa marxalada ugu danbaysa ee shukaansiga waxaana ku soo koobaynaa lafogurka wixii labada ruux isku soo shukaansadeen guur iyo gaabsi.
FIKIRKAAGA WAA NOO MUHIIM IYO KOMENTIGUBA
Posted by jacayl shukansi at 07:44
E-MAIL kala soco!
QAABABKA RAAXADA DUMARKU JECELYIHIIN(waa kuwee)+ warbixin(updated)
R untii dumarku waa ay ka helaan galmada. badanaana waa ay ka fekeraan in ka badan Ragooda. Waxay muujiyaan waxyaalo cajiib ah oo ay ku ...
SIDEE LOO KORDHIYAA DAREENKAAGA KACSIGA? (ragga)
WALIGAA MA DAREENTEY CEEB IYO YAXYAX MARKA AAD TAGTAY SARIIRTA ? QANCIN LA'AANTA LAMAANAHAAGA DARTEED? WALIGAA GAARIGU MA KAAGA DAMAY...
WAA MAXAY MASAYR? maxa keena maxaase looga hortagi karaa?
Dadka qaar ayaa aaminsan in masayrku yahay ififaale ama calaamad muujinaysa jacayl Doodoodana waxay ku saleeyaan "qof aan ii masayray...
qaababka la iskugu diyaariyo raaxada sariirta (akhri)
Raaxa sariireed degdegta oo socota waqti gaaban isla markaana dhamaata wax nah ah ay leedahay ma leh labada qof ee raaxadaas wada qaadan...
SOO JIIDASHA LAMAANAHA.
jacaylka iyo nolosha guud ahaanteedba waxa ay u baahanyihiin faham iyo farshaxan in lagu dheeho si ay dha-dhan iyo qiimo u yeelato. dhal-...
Follow @Shukaansiblog Tweet
20120 SHUKAANSI. Theme images by molotovcoketail. Powered by Blogger.